ဂုဏ်ယူချီးကျူးမိပါတယ်… – Lawkathuta
သရုပ်ဆောင်များ June 20, 2018
အလှူအတန်းနဲ့ ပတ်သက်လာရင် လက်မနှေးတဲ့ ကိုဇေသီဟနဲ့ နန္ဒာလှိုင်တို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ ဒီနေ့မှာလည်း အလှူတစ်ခု ပြုလုပ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ(၁၈) ရက်နေ့မှာ သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာ မွန်ပြည်နယ်တွင် အရေးပေါ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ရေဘေးအတွက် အလှူငွေကျပ် သိန်း(၁၀၀)တိတိကို လှူဒါန်း ခဲ့တယ်လို့ ဇေသီဟရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထားတာပါ။
“မွန်ပြည်နယ်တွင် အရေးပေါ်ကြုံတွေ့ခဲ့သော ရေဘေးအတွက် အလှူငွေကျပ် သိန်း ၁၀၀ ကို ဝန်ကြီးချုပ်ထံ ပေးအပ်စဉ်။” ဆိုပြီး ပြောထားပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ အလှူကိုလည်း ပရိသတ်တွေက ကြည်နူးဝမ်းသာစွာ သာဓုခေါ်ဆိုနေကြတာကလည်း ကောမန့်အပြည့်ပါ။ ဘုရားတည် ကျောင်းဆောက် နဲ့ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ အလှူအတန်းတွေဟာ မြင်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် တကယ့်ကို ကြည်နူးဖို့ ကောင်းလှပါတယ်။
အနုပညာလောကမှာ တစ်ချိန်က အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သူမဟာ ၁၉၉၈ခုနှစ်က ရွှေနန့်သာစံအိမ်နဲ့ အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုနဲ့ ၂၀၀၆ခုနှစ်က တောင်တံမန်သစ္စာဇာတ်ကားနဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု စတဲ့ အကယ်ဒမီရွှေစင်ဆုနှစ်ဆုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Via : Cele Yatkwat
အလှူအတနျးနဲ့ ပတျသကျလာရငျ လကျမနှေးတဲ့ ကိုဇသေီဟနဲ့ နန်ဒာလှိုငျတို့ ဇနီးမောငျနှံဟာ ဒီနမှေ့ာလညျး အလှူတဈခု ပွုလုပျလိုကျပွနျပါတယျ။ဇှနျလ(၁၈) ရကျနမှေ့ာ သူတို့ဇနီးမောငျနှံဟာ မှနျပွညျနယျတှငျ အရေးပျေါကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ ရဘေေးအတှကျ အလှူငှကေပျြ သိနျး(၁၀၀)တိတိကို လှူဒါနျး ခဲ့တယျလို့ ဇသေီဟရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားထားတာပါ။
“မှနျပွညျနယျတှငျ အရေးပျေါကွုံတှခေဲ့သော ရဘေေးအတှကျ အလှူငှကေပျြ သိနျး ၁၀၀ ကို ဝနျကွီးခြုပျထံ ပေးအပျစဉျ။” ဆိုပွီး ပွောထားပါတယျ။သူတို့နှဈဦးရဲ့ အလှူကိုလညျး ပရိသတျတှကေ ကွညျနူးဝမျးသာစှာ သာဓုချေါဆိုနကွေတာကလညျး ကောမနျ့အပွညျ့ပါ။ ဘုရားတညျ ကြောငျးဆောကျ နဲ့ သူတို့နှဈဦးရဲ့ အလှူအတနျးတှဟော မွငျရတဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ တကယျ့ကို ကွညျနူးဖို့ ကောငျးလှပါတယျ။
အနုပညာလောကမှာ တဈခြိနျက အောငျမွငျခဲ့တဲ့ သူမဟာ ၁၉၉၈ခုနှဈက ရှနေနျ့သာစံအိမျနဲ့ အကောငျးဆုံးအမြိုးသမီးဇာတျပို့ဆုနဲ့ ၂၀၀၆ခုနှဈက တောငျတံမနျသစ်စာဇာတျကားနဲ့အကောငျးဆုံးအမြိုးသမီးဇာတျဆောငျဆု စတဲ့ အကယျဒမီရှစေငျဆုနှဈဆုကို ရရှိပိုငျဆိုငျခဲ့သူတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။
ပဋ္ဌာန်း ပစ္စယနိဒ္ဒေသကို အာဂုံပြန်ဆိုနိုင် ခဲ့သည့် မင်းသမီး စုလှိုင်နှင်း
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃ဝ ကျော်ခန့်က မြန်မာတစ်ပြည်လုံး ဗွီဒီယိုရုံနှင့် မြို့ပေါ်ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ခေတ်စားခဲ့သော မင်းသမီး စုလှိုင်နှင်းက ပဌာန်း ပစ္စယနိဒ္ဒေသ အာဂုံရွတ် ဖြေဆိုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ စုလှိုင်နှင်းက သြဂုတ်လ ၃ဝ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပခဲ့သော အဘိဓမ္မာပြန့်ပွားရေး အသင်းကြီး၏ အကြိမ် ၅ဝ မြောက် အဘိဓမ္မာ …
US မော်ဒယ် Gigi Hadid ကို သိတဲ့သူ မြန်မာပြည်မှာ လက်ချိုးရေလို့ရတယ်လို့ ပြောမိလို့ ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ခံရပြီး ဖေစ့်ဘွတ်အကောင့်တောင် Deactivate လုပ်လိုက်ရတဲ့ နေခြည်ဦး
US မော်ဒယ်Gigi Hadid ကို သိတဲ့သူ မြန်မာပြည်မှာ လက်ချိုးရေလို့ရတယ်လို့ ပြောမိလို့ ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ခံရပြီး ဖေစ့်ဘွတ်အကောင့်တောင် Deactivate လုပ်လိုက်ရတဲ့ နေခြည်ဦး မကြားသေးတဲ့ ရက်ပိုက်အတွင်းက နာမည်ကျော် beauty blogger နေခြည်ဦးရဲ့ ၁ မိနစ်ခန့်သာရှိတဲ့ ဆယ်လီရပ်ကွက် မီဒီယာနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ …
ဖြူဖြူထွေးနဲ့ မင်းသားကြီး ဦးကျော်သူတို့ ရိုက်ကူးမယ့် #မသာထရပ်_သေးပါထွက် ဇာတ်ကားအအတွက်ဆွေးနွေး
ဖြူဖြူထွေးနဲ့ မင်းသားကြီး ဦးကျော်သူတို့ ရိုက်ကူးမယ့် #မသာထရပ်_သေးပါထွက် ဇာတ်ကားအတွက်ပြောဖြစ်တာလေးတွေ ???????????????????? ဦးကျော်သူ – သမီးရဲ့ talent ကို ဦးတို့သဘောကျတယ်။ လူတွေကို ရယ်မောပျော်ရွှင်စေမယ်လို့ယုံကြည်တယ် ဖြူဖြူထွေး – အဲ့ဒါအတွက် စိတ်ချပါဦး ရယ်ရရုံတင်မဟုတ်ပါဘူး။ သေးပါထွက်ကျစေရမယ် သမီးတာဝန်ယူပါတယ် ငှဲငှဲငှဲ ???? ဦးကျော်သူ– …
နေတိုးကိုမိန်းမမြန်မြန်ရပါစေလို့မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ပိုပို စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ဟာ နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီနေတိုးရဲ့ အသက် ၃၆ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း မွေးနေ့ဆုတောင်းအနေ နဲ့ အဆိုတော် ပိုပို သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် အျကာင့်ကနေ’ Happy birthday ????????ကိုနေတိုးမိန်းမ မြန်မြန် ရကြပါစေ’ လို့ဆုတောင်းပေးထားပါတယ်။ အကယ်ဒမီ နေတိုး …
ရိုက်ကွင်း ပေါ်မှာအနှိမ်ခံရမှုတွေ ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်–
ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင် နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ် ဟာ ရှင်းရှင်းဘွင်းဘွင်း ပြောဆိုနေထိုင်တတ်သူပါ ။သူမကို ချစ်ခင် အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ် အများအပြားရှိသလို ခင်ပွန်းသည် ကိုဘင်း ကလည်းပရိတ်သတ် တွေ အသိအမှတ်ပြုရတဲ့ ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးပါပဲ ။ ဒီလို အနုပညာ မိသားစု မို့ အနုပညာ အလုပ် …